Blogs » Society » Nepali News, social, entertainment &asite representing Nepal to the world !
बाह्र वर्षमै सेक्स | मुटु साट्नेहरूको भीड
सुवास सापकोटा (नाम परिवर्तन) लाई नै लिऊँ न। उनकै शब्दमा सेक्सका माहिर खेलाडी हुन् उनी। 'हन्टर', उनको समूहमा यस्ता खेलाडीलाई सम्बोधन गरिने शब्द हो। सेक्सका विभिन्न आसनको अनुभव बटुलिसकेका उनका लागि ग्रुप, ओरल सेक्स सामान्य बन्दै गएका छन्। राजधानीको एक प्रतिष्ठित कलेजमा प्लस टूमा अध्ययनरत उनी काठमाडौँमा होस्टेलमा बस्छन्।
गत साता नयाँ बानेश्वरस्थित बिटुबी ह्याप्पी लाइफ सेन्टरमा भेटिएका उनी त्यहाँ यौन शक्तिबर्धक औषधि खरिद गर्दै थिए। 'मानिसको जीवनमा सेक्स गाँस-बास-कपासजस्तै अत्यावश्यक छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको देशव्यापी सर्वेक्षण अनुसार औसतमा साढे १७ वर्षको उमेरमा किशोरकिशोरीले पहिलो पटक यौन सम्पर्क गर्छन्। केही समयअघि परिवार नियोजन संघले गरेको एक सर्वेक्षणमा डोटी जिल्लामा १२ वर्षको उमेरमा किशोरकिशोरीले पहिलो पटक यौन सम्बन्ध कायम गरेको देखिएको थियो। सरकारले गत वर्ष सर्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ९५ हजार जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। एक तथ्यांकले नेपालका किशोर किशारीमध्ये ६४ प्रतिशतले १७ वर्ष पुग्नु अगावै यौन सम्पर्क राख्ने गरेको देखाएको छ। यति ठूलो संख्यामा यौन क्रियाकपालमा संलग्न जनसंख्यामा गरिएको सर्वेक्षणमा तीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कमा कन्डमको प्रयोग गरेको बताएका थिए।
पोखरी घुम्ने क्रममा त्यहाँ प्रशस्तै युगल जोडी भेटिए। उनीहरूको हाउभाउ हेर्दा पोखरीको नाम घडीअर्वा नभई 'इश्क पोखरी' हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। पारिवारिक घुमघाम गर्न आएका कर्ण कुमारले पहिले यहाँ यस्ता युवा जोडी नदेखेको बताए। कुममा कुम मिलाएर बसेका एक जोडीसँग प्रतिक्रिया लिन खोजियो। उनीहरूले असहज मान्दै केही बोलेनन्। प्रत्येक १० मिटरको दूरीमा एक जोडी बसेको थियो। समितिका इन्चार्ज गुप्ताका अनुसार पोखरी प्रत्येक बिहान ४ बजेदेखि बेलुकाको ८ बजेसम्म खुल्ला हुन्छ। दैनिक सयौँ जोडीहरू आउने यस पोखरीमा कुनै जोडी बिहानदेखि बेलुकासम्मै बस्ने गरेको उनले बताए। 'बेलुका हुनुपर्छ, यहाँ कस्ता कस्ता दृष्य हेर्न पाइन्छन्,' गुप्ताले भने, 'हामीलाई लाज लाग्छ, तर उनीहरू लजाउँदैनन्।' नलेखेटेसम्म कतिपय जोडी जानै नमान्ने उनले बताए। बेलुका सिटी बजाउँदै सबै जोडीलाई बाहिर निक्लन आदेश दिने गरेको उनले बताए।
बढ्दो गर्मीमा जस्ताको छानोको तापले आकुलव्याकुल भई कक्षाकोठामा निदाइरहेका इटहरीका साना विद्यार्थीहरु ।
भारतमा शरीर बाहिर मुटु भएको बच्चाको जन्म
भारतको विहारमा शरीर बाहिर मुटु भएको एक बच्चा जन्मिएको छ । विहारको सीवान जिल्लाको नारायणपुर गाउँमा उक्त
बच्चाको जन्म भएको हो । भारतको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् अगस्ट १५ तारिखको दिन स्थानीय रिना देवी
र राघो भगत सन्तानको रुपमा उक्त बच्चाको जन्म भएको हो ।
पटनाको रेनबो अस्पतालका डाक्टरले उक्त बच्चामा इक्टोपिया कोर्डिसको लक्षण देखिएको बताएका छन् । उक्त बच्चालाई अप्रेशन गरेर बचाउने कोशिस गरिएको बताइएको छ ।
डाक्टरहरुले बच्चामा त्यस्तो समस्या कुपोषण, वंशाणुगत रोग र फोलिक एसिडको कमीबाट हुने जनाएका छन् । तथापी उक्त किसिमको रोगको यकिन तथ्य भने पत्ता नलागेको बताइएको छ ।
मोबाइलले बिहे गरायो ४० वर्षीया बिमला र १७ व
यता मोबाइलबाट बिहे भयो, उता मोबाइल घन्टीले ज्यान लियो
काठमान्डौ, ६ वैशाख । ‘चार महिना फोनमा गफ भएपछि ५ फागुनमा दोलालघाटमा भेट भयो,’ सागाचोक, सिन्धुपाल्चोककी ४० वर्षीया विमला पराजुलीले भनिन्, ‘विवाह गर्ने निर्णयपछि भेट गर्दा एकअर्कालाई हेरेर दुवै अचम्ममा पर्यौ ।’
छोरीको भन्दा एक वर्ष कान्छो १७ वर्षीय रवीन विकसँग पराजुलीले दोस्रो विवाह गरेकी छन् । पाँच सन्तानकी आमा पराजुलीकी जेठी छोरी १८ वर्षकी छन् र स्थानीय विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्यनरत छिन् ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पति विदेश गएपछि पराजुलीले दोस्रो विवाह गरेका हुन् । उनले आफू विवाहबाट खुसी भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘पतिले बेवास्ता गरेकाले दोस्रो विवाह रोजे ।’
फुल्पिङडाँडा–१ का विकले भने, ‘मंसिरको पहिलो साता मोबाइलमा मिसकल आयो,’ नयाँ नम्बरबाट आएको मिसकल फर्काउँदा केटीको स्वर आएपछि मख्ख परेँ ।’
चार महिनासम्म फोनमा गफ भएपछि उनीहरू विवाह गर्न तयार भएका हुन् । ‘सुरुमा विवाह भएको छैन भनिन्,’ विकले भने, ‘अविवाहित भनेपछि फोनमा गफ लम्बिन थाल्यो ।’ फागुनमा विमलाले आफ्नो विवाह भएको बताएपछि विकले फरक नपर्ने बताए र विवाहका गर्ने निर्णय बदलेनन् । ५ फागुनमा दोलालघाटमा भेटेपछि उनीहरूले ६ फागुनमा काठमाडौंमा आएर विवाह गरेका थिए ।
पराजुलीका पति विदेशबाट फर्केपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा उजुरी गरेका थिए । उनैको उजुरीका आधारमा प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो । विवाहबाट दुवैजना खुसी भएपछि पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । पराजुलीले भनिन्, ‘मिसकलले जुराएको पतिसँग कुनै गुनासो छैन । विवाहबाट निकै खुसी छु ।’
यता बागलुङमा भने पतिका अगाडि अरू पुरुषसग मोबाइलमा कुरा गरेकै कारण रायडाडा–७ की पवित्रा सापकोटाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । २ वैशाखमा माइती अमलाचँरबाट घर फर्कने क्रममा सापकोटाको मोबाइलमा आएको फोनका कारण ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ ।
सापकोटा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेपछि माइतीले पति श्यामले मारेर झुन्ड्याएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । ‘हत्या वा आत्महत्याबारेमा खुलेको छैन,’ असई शैलेन्द्र खड्काले भने, ‘मृत्युको कारण परपुरुषसग मोबाइल संवाद भएको खुलेको छ ।’
फोन आएपछि पतिले कस्को भनेर सोद्धा पवित्राले फुपूको छोरा भनेको र कुरा गर्न नदिएको पाइएको छ । त्यसपछि श्यामले पत्नीलाई बाटोमै कुटपिट गरेका थिए भने साझ घरमा त्यही नम्बरमा डायल गरेर आमालाई कुरा गर्न दिएपछि पवित्रा घरबाट निक्लिएकी थिइन् । उनको शव आइतबार बिहान घरनजिकैको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
पोस्टमार्टममा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन आएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, महिला अधिकारकर्मीले पतिको दुव्र्यवहारले अप्रिय निर्णय लिन उत्प्रेरित गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । पवित्राका पति एक महिनाअघि मात्र भारत पन्जाबबाट घर आएका थिए । उनीहरूका एक छोरी र एक छोरा छन् । स्रोत : सौर्य दैनिक
प्रेमीका मरेपछी जिउन गाह्रो भएको भन्दै प्
प्रेमलाई मानिसको जीउने आधार पनि भन्ने गरिन्छ । हो यही भनाईलाई चरितार्थ गरिदिएका छन् एक १९ वर्षे युवकले । भारतको मध्यप्रदेशको जबलपुरमा बस्ने १९ वर्षका दिलीप दासले आफ्नो प्रेमिकाको बिछोडमा बाच्न नसकेको भन्दै आत्महत्या गरेका छन् ।
दिलीपले गलामा पासो लगाएर घर अगाडीको इमलीको रूखमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । उनले आत्महत्या पत्र पनि लेखेर छाडेका छन् । उक्त पत्रमा उनले लेखेका छन्, 'रोशनी तिमी छैनौ भने म पनि बाच्दिन । मेरो साथी बन्टी मलाई कसैसँग केही गुनासो छैन् । मात्र मेरो एउटा काम गर्दै की मेरो शरिरलाई पनि त्यही गाडिदिनु जहाँ मेरी प्रेमिकाको शरिरलाई गाडिएको छ ।' यस्तै उनले आफ्नी प्रेमिकाले पनि केही दिन पहिले आत्महत्या गरको उल्लेख गरेका छन् ।
यो आत्महत्याको जानकारी पाएपछी प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । प्रहरीले दिलिपको लाश झारेर पोष्टमार्टमका लागी पठाएको छ भने थप जाँचबुझ गरिरहेको बताइएको छ ।
थरीथरी छन् बेडरुमका दुःख
पुरुषको यौनचाहना सलाईको काँटीजस्तो झरर्र बलिहाल्छ र सेलाउँछ तर महिलाचाहिँ तातेको ताप्केजस्तै बिस्तारै उत्तेजित हुन्छन् ।
बीस वर्षीया नवविवाहिता सुहागरातको मीठो कल्पनामा हराइरहेकी थिइन् । तर, त्यो रात उनका लागि ‘जीवनकै ठूलो कालरात्रि’ बनेर प्रवेश गर्‍यो । नवदुलाहा
श्रीमान्ले सहवासपूर्वको क्रीडा (फोर प्ले) अगाडि नै सीधै मुखमैथुन गर्न कर गरे । सहज मैथुनका लागि उनी तयार थिइन् तर मुखमैथुनका लागि किमार्थ होइन । आफ्नो इच्छाअनुरूप नभएपछि दुवैजना रातैभरि कोल्टे फर्केर सुते र बोलेनन् । भोलिपल्ट नवविवाहिता श्रीमती माइत हिँडिन् ।
ती बीस वर्षीया नवविवाहिताले सुहागरात भाँडिएपछि यौन परामर्शदाता तथा निःसन्तानपनसँग सम्बन्धित डा. समन रुपाखेतीलाई गुहारिन् । यी परामर्शदाताले उनलाई विगतको घटना बिर्संदै श्रीमान्लाई साथीको जस्तो व्यवहार गर्न सल्लाह दिए । ‘उनी अश्लील चलचित्र (पोर्नो फिल्म) बाट प्रभावित भएका हुन सक्छन्,’ यी डाक्टरको ठहर थियो । समनले श्रीमान्सँग भेटे र यौन व्यवहारबारे छलफल गरे । र, अन्त्यमा श्रीमान्ले श्रीमतीसँग माफी मागे । २० दिनपछि माइतबाट घर फर्केकी उनी, परामर्शदाताका अनुसार अहिले दाम्पत्य सुखमा रमाइरहेकी छिन् ।
यौन समस्याकै कारण घरबार बिगे्रकाहरूका लागि अहिले थुप्रै सहयोगी सक्रिय छन् । काठमाडौंमा केही ‘हटलाइन’ सेवा उपलब्ध छन् भने केही एफएम रेडियो र टेलिभिजनले पनि फोनबाट प्रत्यक्ष यौन परामर्श सेवा दिइरहेका छन् । अहिले यौनमनोविज्ञ तथा डाक्टरहरूलाई यौनसम्बन्धी समस्या सुनाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । तालिमप्राप्त परामर्शदाता र डाक्टरहरू पीडितको यौन समस्या समाधान गर्न तत्पर रहन्छन् ।
यौनसम्बन्धी खुलेआम छलफल गर्न धक र डर मान्ने नेपाली समाजमा त्यससम्बन्धी परामर्श सजिलो माध्यम बन्दै छ । तीन वर्षदेखि नेपाल वान टेलिभिजनको यौन समस्याबारे छलफल गरिने दैनिक कार्यक्रम ‘रात परेपछि’मा फोनकर्ताका यौन समस्या समाधान गरिरहेका डाक्टर समन रुपाखेती फोनमा कतिले सामान्य समस्या सुनाउने गरेको त कतिले असामान्य लाग्ने खालका घटना प्रस्तुत गर्ने गरेको सुनाउँछन् । जस्तो एक युवाले केहीअघि ‘रात परेपछि’मा फोन गरेर यस्तो समस्या सुनाए, ‘मलाई एक दिन अचानक सेक्स गर्ने इच्छा भयो । तर, मेरो गर्लप|mेन्ड थिएनन् र सम्पर्कमा कुनै केटी पनि । अति नै भएपछि मैले मेरो छिमेकको १३ वषर्ीय एकजना केटालाई बोलाएँ र थोरै पैसा दिएर उससँग सम्बन्ध राखेँ । ऊ खुसी भयो र मौका मिल्यो कि मलाई ऊसँग सम्पर्क गरिहाल्ने बानी बस्यो ।’ यस्तो अनुभव सुनाउने २१ वर्षे ठिटाको प्रश्न थियो, ‘अब मैले यो बानीबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु ?’ डाक्टर समनले उनलाई ‘सेक्स गर्न इच्छा पलाएपछि हस्तमैथुन गर्न’ सल्लाह दिए । तर, हस्तमैथुनबाट यौन आनन्द लिनेहरूलाई यी डाक्टरको सल्लाह छ, ‘दैनिक हस्तमैथुन गर्नुले कालान्तरमा हानि गर्छ । तर, इच्छा लागेमा सातामा ३/४ पटक गर्दा राम्रो ।’
केहीअघि २२ वर्षे नवविवाहिताले डा. समनलाई भेटेर आफ्नो समस्या राखिन् । उनका ३० वर्षे श्रीमान् प्राध्यापन गर्दारहेछन् । दुवैजना पाँच वर्ष बच्चा चाहँदैनन् । त्यसैले श्रीमान् कन्डम प्रयोग गर्छन् । तर, त्यसले असजिलो पारेको उनले श्रीमतीलाई सुनाएछन् । ‘असजिलो भयो भनेर कहिलेकाहीँ त कन्डम नै लगाउनुहुन्न,’ फोनकर्ताले सुनाइन् । समस्या सुनेपछि समनले राय दिए, ‘बजारमा अनेकथरी अस्थायी साधन छन् । महिला कन्डम, सुई, चक्की आदि । तर, ती जोखिम बाहिरचाहिँ छैनन् । योनिभित्र एक थोपा मात्रै शुक्रकीट खसे पनि गर्भ रहन सक्छ । विर्य योनिबाहिर निकाल्ने -विथड्रल विधि) अपनाए झनै राम्रो । कुन विधि अपनाउने हो तपाईंहरूकै हातमा छ,’ डा. समन भन्छन्, ‘पढेलेखेका, विज्ञ वा आपसमा छलफल गर्न धक मान्ने पति-पत्नीहरू पनि मलाई समस्या सुनाउँछन् । म उनीहरूसँग छलफल गर्छु र त्यही क्रममा समाधान निस्कन्छ ।’
केही वर्ष माता मनकामना आरोग्य केन्द्र, पुतलीसडकमा यौनरोगसम्बन्धी काम गरेका डा. समन रुपाखेती अहिले सतुंगल ड्रग सेन्टर, सतुंगल र नवीन फर्मा कीर्तिपुरमा निःसन्तानपन र यौनरोगको उपचार गर्छन् । आफूसँग यौन परामर्शका लागि आउनेलाई उनी प्रत्यक्ष परामर्श सेवा पनि दिन्छन् । समनले भेटेरै वा टेलिभिजनको कार्यक्रममा सयौँलाई परामर्श दिइसकेको बताउँछन् । उनीसँग परामर्श लिन दैनिक १२-१५ जनाले उनलाई भेटेकै हुन्छन् । टेलिभिजनमा, पर्सनल फोनमा वा हस्पिटलमा परामर्श दिने उनी फोनकर्ताको नाम, ठेगाना पूर्णरूपमा गोप्य राख्छन् । त्यसैले परामर्शदातालाई गरिएका हरेक फोन गोप्य रहने बताउँछन् उनी । ‘म सकेसम्म टेलिभिजनको कार्यक्रममा फोनमा समस्या राख्नेलाई भेट्न चाहन्न । तर, समस्या निकै गम्भीर रहेछ भने मात्रै भेट्छु ।’ भेटेरै परामर्श लिन आउने बिरामी सुरुमा आफूलाई यौन समस्या सुनाउन निकै हिचकिचाउने, डराउने वा अनुहार रातो बनाएर धक मान्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । त्यस्तालाई सुरुमा काउन्सिलिङ गर्दै गएपछि विस्तारै खुल्दै आउने गरेको उनको अनुभव छ ।
डा. समन रातमा गरिने यौनसम्पर्कले बढी सन्तुष्टि दिने बताउँछन् । उनी पुरुषको याैनचाहना सलाईको काँटीजस्तो झरर्र बलिहाल्ने अनि सेलाउने र महिलाको चाहिँ तातेको ताप्केजस्तै विस्तारै आउने बताउँछन् ।
निःसन्तानपनका समेत विज्ञ डाक्टर समनलाई बिरामीहरू निःसन्तानपन र शीघ्र स्खलनको समस्या लिएर भेट्न आउँछन् । मानिस शीघ्र स्खलन, यौन उत्तेजनामा कमी, महिलाको यौनांगको आकार खुकुलो -ठूलो, सानो, लामो), लिंगको छाला च्यात्तिएको, गर्भावस्थामा यौनसम्पर्कले गर्भ तुहिएको, विवाहपूर्व र विवाहपछि यौनसम्पर्क, लिंग र वक्षस्थलका आकार, गर्भाधान आदिबारे बढी जिज्ञासा लिएर आउने गरेको उनी सुनाउँछन् । उनी आफूले सुन्दा पनि जिब्रो टोक्नुपर्ने खालको समस्या पनि सामना गर्ने गरेको सुनाउँछन्, ‘समलिंगी, पशुकरणी, हाडनाता करणी, सामूहिक यौन र बहुपुरुष/महिलासँग यौन सम्बन्धजस्ता समस्या पनि आउँछन् ।’ ‘रात परेपछि’मा बालकदेखि वृद्धसम्मले सम्पर्क गर्छन् । जस्तो एक जना १३ वर्षेले आफ्नो जनेन्दि्रयबारे सोधेका थिए भने ५२ वर्षेले यौनइच्छा घट्दै गएकोमा खुवै दुःखमनाउ गरेका थिए ।
यौनसम्बन्धी धेरैजसो मानिसमा चेतनाको कमी र लापरबाहीले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको उनी बताउँछन् । एक ३५ वर्षे विवाहित व्यापारी यस्तै अज्ञानताको सिकार भएका थिए । श्रीमतीसँग मात्रै यौनसम्पर्क गर्ने गरेका उनलाई कम्मर दुख्दैमा, पिसाब पोल्दैमा साथीहरूले एचआइभी भयो भनिदिएछन् । यसले उनलाई दिनुसम्म तनाव दियो । उनले डा. समनलाई भेटेर सीधै ‘डाक्टरसाब मलाई एचआइभी भयो’ भने । उनले रगत जाँच गरे र रिपोर्टमा ‘नेगेटिभ’ देखियो । तर, पनि उनको शंका हटेन । उनले आत्महत्या गर्नेसम्मको सोच बनाए । समनले थुप्रैपटक काउन्सिलिङ गर्नुपर्‍यो । २ वर्षसम्म ‘एन्टिडिप्रेसन टि्रटमेन्ट’ गरेपछि मात्र उनी सामान्य भए ।
त्यस्तै एक २३ वर्षे अविवाहित विद्यार्थी साथीहरूको लहैलहैमा यौन व्यवसायी महिलासँग असुरक्षित यौनसम्पर्कमा होमिए । अनि आफूलाई एड्स लागेको शंकामा दिनरात आँसुमा डुब्न थाले । चुरोट र रक्सीको लत सुरु गरे । पढाइमा ध्यान दिन छोडे । घरमा विवाहको कुरा आउँदा पनि टाढा-टाढा भाग्न थाले । उनले ‘रात परेपछि’मा फोन गरेर डा. समनसँग आफ्नो समस्या राखे । उनको सल्लाहमा एचआइभी परीक्षण गर्दा ‘नेगेटिभ’ देखियो । उनले पछि विवाह गरे र आफ्नो पढाइ पनि सुचारु अघि बढाइरहेका छन् ।
‘रात परेपछि’मा एक १७ वर्षे आफ्नो लिंग सँगै पढ्ने साथीको भन्दा सानो भएको बताउँदै त्यसमा हस्तमैथुनले केही रोल खेल्छ कि खेल्दैन र यौन सन्तुष्टिमा ठूलो लिंगको के भूमिका हुन्छ भनेर सोध्दैथे । डा. समनको सल्लाह थियो, ‘सबैको यौनांग उस्तै र उत्रै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । ठूलो लिंग हुँदैमा सन्तुष्टि हुन्छ भन्नु भ्रममात्रै हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।’ केही युवती आफ्नो स्तन साथीको भन्दा सानो भएकोमा चिन्ता लिने गरेको र आफूसँग स्तन ठूलो बनाउने उपाय बताइदिनुपर्‍यो भन्दै आउने गरेको उनी बताउँछन् । केही युवती स्तन ठूलो हुँदा पनि पीर मान्ने गरेको र सानो बनाउने उपायको खोजी गर्दै आउने गरेको उनको अनुभव छ । केटीहरू पनि हस्तमैथुनको समस्या सुनाउन आउँछन् उनलाई । उनीहरू प्रायः बजारमा पाइने सस्ता सेक्स टोय र मसाज गर्छन् र यदाकदा औंला प्रयोग गर्छन् । अनि योनि कालो देखिएपछि आत्तिएर डाक्टर वा परामर्शदाताकहाँ पुग्छन् ।
‘मेरोमा आइपुगेका यौन समस्यालाई अध्ययन गर्दा धेरैजसो महिलाले विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध राखेको पाइयो । उनीहरू सुरक्षित यौनबारे बुझ्न चाहन्थे,’ उनी भन्छन् । पछिल्लो समय परामर्श लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । उनीसँग परामर्श लिन कहिलेकाहीँ नेपालमै बसेर काम गरिरहेका विदेशी र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि आउँछन् । उनको अनुभवमा महिलाहरू विशेषतः वक्षस्थलको बनावटलाई लिएर चिन्तित हुन्छन् र पुरुषहरू लिंग उत्तेजित नहुने कुरामा आत्तिने गर्छन् । पुरुषहरू महिलालाई उत्तेजित बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्छन् । ‘महिला कानको लोती, घाँटीपछाडिको छाला, ओठ, आँखा, स्तन, नाइटो, पेट, तिघ्राको मासु, यौनांगको स्पर्शले बढी उत्तेजित हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
टेलिभिजनमा कहिलेकाहीँ परामर्शदाता र प्रस्तोताले ‘ब्लफ कल’को समेत सामना गर्नुपर्छ, जसमा फोनकर्ताले अश्लील कुरा गर्न थाल्छन् । यौनसम्बन्धी जटिल समस्या सम्हाल्न पोख्त भइसकेका प्रस्तोता र डाक्टर यस्ता ‘ब्लफ कल’को उचित व्यवस्थापन गर्न पनि पारंगत भइसकेका छन् ।
डा. समन यौन परामर्श सुविधालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बन्द समाजको कारण हामीकहाँ पनि यौन विकृति झांगिन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने अश्लील फिल्म र किताबबाट धेरै युवा कुमार्गतिर पनि लागेका छन् । किशोर/किशोरीलाई यौनबारे जति जिज्ञासा बढेको छ त्यसभन्दा भ्रम धेरै छ ।’
यौनसम्बन्धी केही भ्रम
कुमारी केटीसँगको संसर्गले पुरुषलाई लागेको असाध्य रोग पनि निको हुन्छ ।
दैनिक हस्तमैथुनले लिंग सानो बनाउँछ ।
विशेष खाना र अभ्यासले लिंगको आकार वृद्धि हुन सहयोग पुग्छ ।
पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी)ले पुरुषलाई नपुंसक बनाउँछ ।
महिलाको तुलनामा पुरुषको यौनशक्ति बढी हुन्छ ।
रजोनोवृत्तिपछि महिलाको यौनजीवन समाप्त हुन्छ ।
पहिलो यौनसम्पर्कमा महिलाको योनिबाट रगत अनिवार्य निस्कनुपर्छ ।
रजस्वला भएको समयमा यौनसम्पर्क राख्नु असुरक्षित र अव्यावहारिक हुन्छ ।
पहिलोपटकको यौनसम्पर्कले महिला गर्भवती हुँदैनन् ।
स्तनपान गराउँदै गरेकी महिला गर्भवती हुन्नन् ।
यौनसम्पर्कको वेला योनिबाहिर विर्य निकाल्दा महिला गर्भवती हुन्नन् ।
निद्राको समयमा चरमोत्कर्षमा पुग्नु वा स्वप्नदोष हुनु समस्या हो ।
ठूलो लिंग भएका पुरुषबाट महिला बढी सन्तुष्ट हुन्छन् ।
सफल यौनजीवनका केही टिप्स
यौनसम्पर्कका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार रहनुहोस् ।
यौनसम्पर्कको वेला कोठालाई न्यानो बनाउनुहोस् ।
यदि तपाईंको महिलासाथीलाई टाउको दुखेको छ भने उसलाई यौनसम्पर्कको माध्यमबाट चरमोत्कर्षमा पुर्‍याउनुहोस् जसले टाउको दुखाइ निको हुनेछ ।
कन्डम तथा अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुहोस् ।
व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् ।
हतारमा सम्पर्क नराख्नुहोस् । यौनसम्पर्कअघि फोर प्ले विधि अपनाउनुहोस् । महिलाको कानको लोती, घाँटीपछाडिको छाला, ओठ, आँखा, स्तन, नाइटो, पेट, तिघ्राको मासु, यौनांगको स्पर्श गर्नुस् जसले महिला उत्तेजित हुन्छन् र चरोमत्कर्षमा पुग्छन् ।
यौनसम्पर्कमा विभिन्न आसनको प्रयोग गर्नुहोस् ।
हप्ताको तीनपटक सम्पर्क राख्ने गर्नुहोस् ।
दैनिक हस्तमैथुन गर्नाले कालान्तरमा हानि गर्छ । तर, इच्छा लागेमा सातामा ३/४ पटक गर्दा राम्रो ।
नोट पढी सके पछी अरु पाठक माझ पुराउन को लागि SHARE गरि दिनु हुन् अनुरोध गर्दछु
५५० डलरमा 'पागल'लाई छोरी बिक्री
३० साउन, एजेन्सी । चीनकी एक आमाले आफ्नो १२ वर्षे छोरीलाई मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको केटासँग बिवाह गर्नका लागि बेचिदिएकी छिन् । काई नामकी ती आमाले १२ वर्षकी छोरी जियालाई करिब ५ सय ५१ अमेरिकी डलरमा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको केटासँग बिवाह गर्नको लागी बेचिदिएकी हुन् ।
गत अगस्तमा बेचिएकी जियामाथी ३० वर्षका मानसिक सन्तुलन बिग्रेका केटाले करिव १ वर्षसम्म बलात्कार गरेका थिए । जीयालाई उनका काकाले करिब १ वर्षपछी उक्त केटाको चंगुलबाट छुटाएका थिए ।
जीयाकी आमाले उनलाई १५ वर्षको उमेरमा जन्माए पनि जीयाको लालनपालन भने उनका काकाले गर्दै आएका थिए । जीयालाई काकासँग एउटा रेष्टुरेन्टमा काम लगाइदिन्छु भनेर लगेकी जीयाकी आमाले उनलाई ३ हजार ५ सय युआनको लोभमा बेचिदिएकी थिइन् ।
यो थाहा पाएपछी उनका काकाले आफ्नो परिवार र आफन्तलाई बोलाए र जीयाको हजुरबुबा बिरामी भएको र उनले जीयालाई खोजिरहेको बताउँदै घर ल्याएका थिए । पछी केटाका परिवार जीयालाई लिन काकाको घरमा आएका थिए तर काकाले जियालाई नपठाउने बताएपछी जीयालाई जबरजस्ती लैजान खोज्दा काकाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
तत्काल आईपुगेको प्रहरीले केटा, केटाका बाबुलाई पक्राउ गरेको थियो भने जीयाको आमालाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीमा दिएको बयानमा केटाका बाबुले आफूलाई यस्तो विषय कानून विरूद्ध भएको थाहा नभएको र आफूलाई छोराको लागी श्रीमती चाहिएकाले मात्र यस्तो काम गरेको बताएका छन् ।
जनै पुर्णिमाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना
जनैपूणीमा तथा रक्षा बन्धनको सुभ अबसरमा तपाईहरु सबैमा सुभकामना ब्यक्त गर्न चाहान्छौ ।